အသည်းကွဲဝေဒနာ၊ ဒီနည်းလမ်း ငါးခုနဲ့ ကျော်လွှားကြည့်ပါ - Hintharmedia
အသည်းကွဲဝေဒနာ၊ ဒီနည်းလမ်း ငါးခုနဲ့ ကျော်လွှားကြည့်ပါ
နင့်နင့်သည်းသည်း ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ ချစ်သူနဲ့ ဆက်ဆံရေး ပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါ နာကျင်အထီးကျန်ပြီး ဘဝမှာ ကွက်လပ်တစ်ခု ဖြစ်သွားသလို ဟာတာတာခံစားချက်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
တည်ဆောက်ထားတဲ့ အချိန်ကာလနဲ့အမျှ သံယောဇဉ်နဲ့ အမှတ်တရတွေကို ပြန်သတိရရင်း အလုပ်အကိုင်ပျက်တာတွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တွေ့ဆုံကြုံကွဲ သဘာဝပဲမို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီး နာကျင်ပူလောင်မှု အချစ်နွံထဲကနေ ရုန်းထွက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
၁. ဒဏ်ရာတွေကို လက်ခံလိုက်ပါ။
ချစ်ရသူနဲ့ လမ်းခွဲရတဲ့အခါ အစပိုင်းမှာ မယုံကြည်နိုင် ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပြန်အဆင်ပြေသွားမှာပါ၊ စိတ်ပြန်လည်လာမှာပါ၊ စသဖြင့် မျှော်လင့်ချက်တွေ ထားမိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကလည်း တကယ်တမ်း ပြတ်သားသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေအတွက် ပိုလို့တောင် နာကျင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ပြသနာနဲ့ အခြေအနေကို အရှိအတိုင်း လက်ခံလိုက်ပါ။ အစပိုင်းမှာ လက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်တောင် မနည်းကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်ပြတ်တောက်သွားပြီဆိုတဲ့ အခြေအနေမှန်ကို လက်ခံနိုင်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လည်တည်ဆောက်လို့ ရနိုင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂. အလေ့အကျင့်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်ပါ။
သူနဲ့အတူရှိခဲ့စဉ်အချိန်က စာပို့တဲ့အလေ့အထက စပြီး အတူတူလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အကျင့်တွေ (ဥပမာ – ပိတ်ရက်တိုင်း ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ ပွဲတော်တွေ သွားတာ) ကို မေ့လိုက်ပါ။ အတူတူဖန်တီးမှဖြစ်မယ့် အရာတွေထက် တစ်ယောက်ထဲ လုပ်လို့ရတဲ့ အရာတွေ၊ အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ ဖန်တီးရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ကြိုးစားလုပ်ကြည့်ပါ။ လူဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်တွေ့ရင် တစ်ချိန်က ဆက်ဆံရေးတွေအကြောင်း ပြန်အစဖော်နိုင်ပေမယ့် လူသစ်တွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ၊ အမှတ်တရအသစ်တွေကို ဖန်တီးရင်း နယ်ပယ်အသစ်လေးကို တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်စရာတွေများနေတဲ့အခါ ပြန်သတိရပြီး ငိုချင်နေတဲ့ အချိန်တွေ တဖြည်းဖြည်းလျော့လာပါလိမ့်မယ်။
၃. အပြင်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါ နှစ်ဖက်စာ တွေးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အပြင်လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ပြန်လည်သုံးသပ်မှသာ အတ္တမာန မပါဘဲ အခြေအနေမှန်ကို သုံးသပ်နိုင်မှာပါ။ နှစ်ယောက်သားရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ၊ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆနဲ့ အလုပ်အကိုင် စတာတွေကို ယှဉ်ထိုးပြီး ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြန်သုံးသပ်တဲ့အခါ အမှားအမှန်နဲ့အတူ၊ ဆင်ခြင်စရာတွေကိုပါ မြင်လာရပါလိမ့်မယ်။
အသဲကွဲစဉ်အချိန်မှာတော့ ရက်စက်လေခြင်းလို့ တွေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သနားမိနေမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အပြန်အလှန် သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကိုယ်မပိုင်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်က ကိုယ်လိုချင်သလို ဖြစ်မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း သိလာမှာပါ။ ဒါကြောင့် သူ့အပေါ် အဆိုးမြင်နေမိတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်က ပူလောင်နေရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုးစားပြီး အကောင်းဖက်က လှည့်တွေးပေးလိုက်ပါ။ အကောင်းမြင်လွန်းပြီး သနားနေမိတယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ပျော့လွန်းရင် နောက်တစ်ကြိမ်လဲ ထပ်ခံစားရနိုင်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
၅. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုချစ်ပါ။
ကိုယ့်ဘဝအတွက် ပိုကောင်းမယ့် အခြေအနေတွေကိုပဲ ဖန်တီးပါ။ များများသင်ယူပါ၊ သိသလောက်ကို မျှဝေပါ။ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့လူတွေကို တန်ဖိုးထားရင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဝေမျှပါ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းဆီက အချစ်ကို မျှော်လင့်ပြီး အချိန်တွေ ကုန်နေတာထက် ချစ်ကြ၊ခင်ကြသူတွေ များများရှိတဲ့ အသိုက်အဝန်းမှာ ကျင်လည်ရတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ယခင်ဆောင်းပါးအမေရိကန်မှ တူရကီသို့ လက်နက် ဒေါ်လာ သုံးဘီလျံခွဲ ဖိုး ရောင်းချ